Mma na ahụike | Ozi bara uru maka onye ọ bụla.
Naa: Mma na Ahụike
Kedu ihe bụ thrombosis, na otu esi emeso ya?
Kedu ihe bụ thrombosis, na otu esi emeso ya? Site na thrombosis na veins, mkpịsị ọbara na-apụta n'ime mkpịsị ọbara ọbara, nke gụnyere ọbara ọbara uhie, ọbara ọbara ọcha, platelet na fibrin nke metụtara akụkụ dị n'ime ụgbọ ahụ na ...
Kedu ihe ime ime?
Kedu ihe ime ime? ihe ndị na-eme ka ọkpụkpụ na-eme ka ọkpụkpụ ahụ bụrụ akụkụ ahụ nke etinyere akwa na-esi na mmalite nke tube n'ime akpanwa. na nwanyị dị mma, fatịlaịza. na egg cell na-aga site na 10 ụbọchị na ...
Ntak emi ẹma ẹsịnde mme obụpidem emi ẹdude ke pseudoeparthrine ke Russia?
Ntak emi ẹma ẹsịnde mme obụpidem emi ẹdude ke pseudoeparthrine ke Russia? Nke a abụghị n'ihi ụfe, mana n'ihi na ọgwụ ndị a na-akpata ọgba aghara n'obi, obi mgbatị, na ikekwe ọrịa strok. Ndị ọkà mmụta sayensị Ịtali na-akọwa ikpe ahụ ...
Kedu esi gwọọ migraine ma ọ bụ wepụ ihe mgbu ngwa ngwa?
otu esi agwọ migraine ma ọ bụ belata ihe mgbu ngwa ngwa. Azụ akwara azụ (n’agbata ntị na n'okpuru) iji ịhịa aka na-ete “nwa okorobịa” isi, na-a teaụ tii na-ekpo ọkụ ma tinye igwe ojii na-ekpo ọkụ na nyocha, mana n'ozuzu ya ka mma…
Biko ị nwere ike ịgwa m ihe a na-akpọ mmanụ mmanu venom?
Biko ị nwere ike ịgwa m ihe a na-akpọ mmanụ mmanu venom? APIZAPTPOH (APISARTHRON) Ụdị Ụdị: Ude maka iji mpụga. Ihe na-emepụta: 100 g cinemie nke kachasị na-agụnye: Orion nke anu anu - Cmg Methyl salicylate ...
Gịnị mere o ji esi ísì njọ?
Kedu ihe kpatara na ochea ji dị oke njọ?! Ọ bụrụ na ị tufuo ihe mkpofu, ọ na-esikwa ísì ọjọọ ruo ọtụtụ ụbọchị! "Ọ bụ mkparị ...
Nye nkọwa nke echiche nke riri ahụ? 10b
Nye nkọwa nke echiche nke riri ahụ? 10b Drug dependence Mmebi ahụ siri ike, nke na-egbu mgbu na ihe ndị na-eme ihe akwara, imebi ahụ na psyche, ihe na-egbu egbu ma na-eme ka usoro nhụjuanya na-egbuke egbuke, bụ nke na-eme ka ọ bụrụ ọnọdụ ...
Kedu ụbọchị bụ Ụbọchị Ahụ Ike Ụwa?
Kedu ụbọchị bụ Ụbọchị Ahụ Ike Ụwa? A na-eme ememe ụbọchị 7 Eprel Akara Ụbọchị Ọhụụ n'ụbọchị n'ụbọchị ahụ ka Ụlọ Ọrụ Ahụ Ike Ụwa kere na 1948. Kemgbe ahụ, ndị òtù Òtù Ahụ Ike Ụwa ...
Gịnị kpatara urticaria?
Kedu ihe kpatara urticaria? Mpụ nke microflora ... dịka otu n’ime ihe ndị ahụ, Yandex ga - enyere aka ma ọ bụrụ esli eto y vas ka le4ites y allergologa mmeghachi omume nfụkasị ihe… Ọ bụ naanị chọpụta na…
Gini mere ọla-edo ji gbanye m aka?
Gini mere ọla-edo ji gbanye m aka? n'ihi na ọlaọcha. dị ka m nụrụ! ma i nwere ihe n'ime, ya bu, ufodu owara ahuhu, ma obu zglazili Oxidized. Ahịhịa na amonia. Enwere m ...
Kedu ihe bụ physiotherapy?
Gịnị bụ physiotherapy? etol usoro usoro ọgwụgwọ dị iche iche, dịka ọmụmaatụ, electrophoresis Physiotherapy (site na Greek ph # 253; sis - ọdịdị na ọgwụgwọ), ngalaba nke ọgwụ na-amụ akụrụngwa ọgwụgwọ nke ihe anụ ahụ ma na-etolite usoro maka iji ha na ebumnuche ọgwụgwọ na ebumnuche ...
Seborrhea nso oria? Ọ na-efe efe ???
Ọrịa ụdị ọrịa na-efe efe? Na-efe efe ??? N'ikwu ya n'ụzọ dị mfe, seborrhea bụ ero na-akpata dandruff. Fungus bụ ọrịa na-efe efe, enwere ike ị nweta ya na onye na-edozi isi ma ọ bụrụ na ejighị ya nke ọma ...
Ngwá ọgwụ ndị dị aṅaa maka ụkwara ụda?
Ngwá ọgwụ ndị dị aṅaa maka ụkwara ụda? kpachara anya na ụmụ anụmanụ ugbu a, ebe ọrụ a ga-enye gị ndụmọdụ ka ị ghee mushrooms ma ọ bụ ihe atụ na-ewere 100 dollar na ahịa ọgwụ sịnụ ka m gaa na tramadol na ...
lingonberry na - ebuli elu ma ọ bụ na -
lingonberry na - ebuli elu ma ọ bụ na - Nrụgide na-ebelata chokeberry. Lingonberry anaghị emetụta ọgwụ ọjọọ. Lee Federal Register of Medicines :) nke a bụ nwayọọ diuretic, nke pụtara na ọ lowers obere Normalizes ọbara mgbali ọ bụrụ na ọ bụ ...
Kedu ihe dị njọ?
Kedu ihe dị njọ? Ezigbo Zara! N'ọhụụ ụjọ nke ahụ mmadụ, na mgbakwunye na etiti na mpaghara, ihe a na-akpọ vegetative ụjọ na-ahụkwa dị iche iche, nke na nke abụọ na-anọchi anya abụọ ụdị: parasympathetic ...
Kedu ụdị elu dị elu kachasị mma?
Kedu ụdị elu dị elu kachasị mma? nke ga-adabara gị. ya mere ọ dị mfe ma nwee ntụsara ụkwụ. M na-agụ na nso nso a na 11 ikiri ụkwụ cm na-enyere aka inweta orgasm, n'ihi na ọ bụrụ na ị na-eje ije ...
Laryngitis esi emeso ya? ọ na-efe efe?
Laryngitis esi emeso ya? ọ na-efe efe? Ọ bụghị na-efe efe, ma ọ dị mma injections. Mbadamba ụrọ enweghị ike ịgwọ. Ọ ka mma ịjụ ozugbo maka injections. Laryngitis bụ ụfụ nke larynx na ụda olu, nke e gosipụtara site n'ikwu okwu, ...
Kedu ihe dị larịị ụkwụ ụkwụ na nwata?
Kedu ihe dị larịị ụkwụ ụkwụ na nwata? otu ụdị ụkwụ ụkwụ. ọgwụgwọ - nri na-edozi ahụ kwesịrị ekwesị; arụ ọrụ anụ ahụ; ezigbo akpụkpọ ụkwụ, usoro nlekọta oge ọ bụla ma ọ bụ mgbe nile; ịhịa aka mgbe niile na nleta oge na-aga na orthopedist ụmụaka ...
Ego ole ka ọ na-eri iji ntutu isi? ma ọ bụghị ntutu niile, kama ọ bụ naanị ọnụ
Ego ole ka ọ na-eri iji ntutu isi? ma ọ bụghị ntutu niile, mana naanị otu nsonye 1 na-akwụ ụgwọ site na 120 rubles. ma ọ bụrụ na Bosko dum na-ebu na 100-200 bundles (karịa ...
Kedu ihe bụ sciatica?
Kedu ihe bụ sciatica? Radiculitis bụ ezigbo egwu. Ogbugbu. Oge oyi a bụ oge nke abụọ. Achọghị m ka m mee ihe ọ bụla, ma ọ bụrụ na ha enweghi ihe mgbu ahụ anaghị akwụsị. Onye ọzọ nwere ike inye ndụmọdụ? Enwere ...
Ajuju 14 na nchekwa data emepụtara na sekọnd 0,418.